Mahdi Guuleed: ” Waxaan qorsheynay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi” | Burconews
Mahdi Guuleed: ” Waxaan qorsheynay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi”
September 23, 2018 - Written by Admin
Burconews.net_Ra’iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) wuxuu markii ugu horreeysay sheegay dowladda Federaalka inay qorsheysay kulan fool ka fool ah oo ay yeeshaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi.
” Wada-hadalladii Soomaaliland iyo dowladda federaalka oo wajiyo badan yeeshan si fiican noogu qabsoomay, waxaa naga go’an haddii aan nahay dowladda federaalka inaan dardargalino inan dib uga shaqeyno.” ayuu yiri ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo inta ku daray ” Ku talagal ayaa jiray bishii March in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi isku yimaadan oo dhiig cusub la galiyo wadahadalka, jadwal cusub loo sameeyo qorshe uu ka dhasho, way naga go’antahay wada-hadalada mar walba inay qabsoomaan.”
Dowladda federaalka ayuu sheegay in wada-hadallada ay dardar cusub galin doonto oo ay ka shaqeyn doonan sidii dhaqso wada-hadallada ay dib ugu billaaban lahaayeen.
“Hamiga ugu weyn ee dowladda federaalka waa in madaxweyne Farmaajo ka dego magaalada Hargeysa ,sidii Abiy Axmed uu uga degay Asmara .. mar alla marka ay suragal tahay walaalaheena reer Soomaaliland ,Hargeysa iyo Muuse Biixi ay u furanyihiin in madaxweyne Farmaajo uu Hargeyso ka dego oo walaalaha Soomaaliyeed ee reer Hargeysa la fadhisto oo u la sheekeysto Muuse Biixi uu la sheekeysto salaadiinta caanka ah ee reer Hargeysa.”
“Waxaa kalo albaabka uu mar walba u furanyahay madaxweyne Muuse Biixi inuu Muqdisho yimaado markuu doonana ka soo dego, annaga dhankeena waa diyaar ,haddii berri ka maalin ay suurtowdo in walaalaheena reer Hargeysa madaxweyne Farmaajo ay martigaliyaan ogalaadana inuu yimaado diyaar ayaan u nahay inan Hargeyso ka degno.” ayuu raaciyay hadalkiisa ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya sida uu ku sheegay hadal kooban oo ay baahisay idaacadda maxalliga ah ee Dalsan.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya wuxuu warkan sheegay xilli dhowr mar oo hore ay Soomaaliland ku eedeysay dowladda federaalka inaysan daacad ka ahayn wada-hadallada oo aan wax natiijo ah laga gaarin illaa hadda.